Cabdikariin Muuse Qalbidhagax oo si weyn loogu soo dhoweeyay magaalada Jigjiga[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Cabdikariin Muuse Qalbidhagax oo si weyn loogu soo dhoweeyay magaalada Jigjiga[Sawirro]
JIGJIGA – Waxaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Jigjiga Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbidhagax oo kamid ah saraakiisha Jabhada ONLF.
Jabhada ONLF ayaa dhawaan heshiis la gaartay dowladda Itoobiya oo sanado badan dagaal kula jirtay.
Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbidhagax ayaa ai weyn loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha magaalada Jigjiga iyadoona saraakiil ka tirsan ONLF iyo boqolaal qof oo taageerayaasha uruka ah ay ka qeybgaleen soo dhaweyntiisa.
Qalbidhagax oo saxaafadda la hadlay ayaa ka mahadceliyay sida loo soo dhaweeyay ,wuxuu sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in uu soo gaaro Jigjiga,wuxuuna la kulmay madaxda ururka ONLF oo horey ugu sugneyd magaalada Jigjiga.
Saraakiisha sarsare ee Jabhada ONLF ayaa xilligan wada wadatashi ku aadan sidii wadahadalo ula yeelan lahayd dowladda Itoobiya,iyadoona madaxda intooda badan doonayaan in dhulka Soomaalidu degto ay ka xoroobaan dowladda Itoobiya.
Madaxda Jabhada ONLF ayaa lagu wadaa maalmaha soo socda iney booqashooyin ku kala bixiyaan magaalooyinka waaweyn ee maamulka Soomaalida si ay wadatashi ula yeeshaan qeybaha kala duwan ee bulshada.